Izitayela zokwakha, iiHome zaseMerika ukusuka ngo-1600 ukuya namhlanje
I-American Residential Architecture kwiNkcazo
Nangona indlu yakho yinto entsha, i-architecture yayo ibangela ukuphefumlelwa kwixesha elidlulileyo. Nasi isingeniso kwindlela zendlu ezitholakala kulo lonke elaseMerika. Fumana oko kwathonya iindlela zokubaluleka zezindlu kwi-US ukusuka kobuKoloni ukuya kumaxesha anamhlanje. Funda indlela uphuhliso lweendawo zokuhlala oluye latshintshile ngayo kwiinkulungwane, kwaye ufumanisa iinkcukacha ezithandekayo malunga nefuthe eluncedo oluncede ukuma ikhaya lakho.
Iimpawu zeNdlu zaseMelika zaseKoloni
USamuel Pickman House, c. 1665, Salem, eMassachusetts. Ifoto © 2015 Jackie Craven
Xa iNorth America ihlanganiswa yiYurophu, abahlali bazisa izithethe ezakhiwa kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo. Izindlela zasekhaya zaseMerika zaseKoloni ukusuka kwii-1600s ukuya ku -American Revolution ziquka uluhlu olubanzi lwezinto zokwakha, kuquka iNew England Colonial, iColonial Colonial, i-Dutch Colonial, iColonial Colonial, iColonial Colonial, kwaye ke, yeyona nto eyaziwa ngokuba yiColonial Cape Cod. Kaninzi "
I-Neoclassicism Emva kwe-Revolution, 1780-1860
I-Neoclassical (Ukubuyiselwa kweGrike) iStanton Hall, 1857. Ifoto nguFranz Marc Frei / LOOK / Getty Izithombe
Ngethuba lokusungulwa kwe-United States, abantu abafundele njengoThanson Jefferson bavakalelwa kukuba iGrisi neRoma yakudala zivakalisa iinjongo zedemokhrasi. Emva kwe-American Revolution, i-architecture yabonakalisa imilinganiselo ye- classical yolawulo kunye ne-symmetry-i-classicalism entsha yelizwe elitsha. Bobabini izakhiwo zikaRhulumente kunye neseburhulumenteni kulo lonke ilizwe lithatha lolu hlobo lwezakhiwo. Okumangalisayo kukuba, ezininzi izindlu zokuvuselela idemokhrasi eziphefumlelweyo zaseGrisi zakhiwe njengezindlu zokulima ngaphambi kweMfazwe yombango (i-antebellum).
Abazalwana baseMelika bakhawuleza bafunyanwa ukusetyenziswa kwemibandela yaseBrithani njengesiGeorgia okanye uAdam ukuchaza izakhiwo zabo. Kunoko, balingisa iindlela zesiNgesi zemihla kodwa babiza isitayela seSweden, ukuhluka kwe-neoclassicism. Olu lwakhiwo luyafumaneka kwi-United States ngamaxesha ahlukeneyo kwimbali yaseMelika. Kaninzi "
Indawo yase-Ernest Hemingway, 1890, i-Oak Park, e-Illinois. Ifoto nguCarol M. Highsmith / Buyenlarge / Getty Izithombe (ehlanjwe)
Ukulawula kweNdlovukazi yaseBritani ukusuka ngo-1837 ukuya ku-1901 yabiza igama elinye lezona zihlandlo eziphambili kakhulu kwimbali yaseMelika. Izixhobo zokwakha iMisa kunye nezakhiwo ezenziwe ngumbane ezenziwe ngaphaya kwemigca yomzila zenza ukuba kwakhiwe izindlu ezinkulu, ezilungeleleneyo, ezifikelelekayo eNtshona Melika. Iintlobo ezahlukeneyo zama-Victorian zivele ziquka i-Italiyane, uBukhosi boBibini, iGothic, u-Queen Anne, i-Romanesque kunye nabanye abaninzi. Isitayela ngasinye sexesha lama-Victori sasinempawu ezahlukileyo.
Iminyaka yobudala 1880-1929
Ukunyuka kwembambano kwangexesha elisaziwayo njengexesha elibukhali, ukongezwa kobutyebi bokuqhutyelwa kwe-Victorian ekupheleni. Ukususela ngo-1880 ukuya kutshatyalaliswa kweMelika yokuKhulelwa kweNtlupheko enkulu, iintsapho ezixhamle kwi -Industrial Revolution e-US zibeka imali yazo kwisakhiwo. Iingxowa-shishini zezoshishino zazingenisa ubutyebi obukhulu kwaye zazakhela amakhaya ahlukeneyo. Inkosikazi ka-Anne Anne izakhiwo zenziwe ngamatye, njenge-Ernest Hemingway kwindawo yokuzalwa e-Illinois, yaba mkhulu kakhulu kwaye yenziwe ngamatye. Amanye amakhaya, aziwa namhlanje njengeCateauesque, awaxelisa ubukhulu beendawo zakudala zaseFransi kunye neenqaba okanye ama-châteaux . Ezinye izitayela ukusuka kweli xesha ziquka i-Beaux Arts, i-Renaissance Revival, i-Richardson Romanesque, i-Tudor Resvival, kunye ne-Neoclassical-zonke zilungele ukudala ama-cottages aseMelika kwizityebi kunye nodumo. Kaninzi "
I-Usonian Isitayela se-Lowell kunye no-Agnes Walter House, eyakhiwa e-Iowa, ngo-1950. Ifoto nguCarol M. Highsmith, iifoto kwiColor M. Highsmith Archive, iThala leeNkcazo, iIprinted and Photographs Division, Inombolo yokuzaliswa: LC-DIG-highsm-39687 ( ehlanjwe)
Umakhi waseMelika uFrank Lloyd Wright (1867-1959) wahlaziya ikhaya laseMelika xa eqala ukuyila izindlu ezineendlela eziphantsi kunye nezithuba ezivulekileyo zangaphakathi. Izakhiwo zakhe zazisa ukuthula eJapan kwilizwe elinabantu abaninzi baseYurophu, kwaye iinjongo zakhe malunga nokucwangciswa kwezinto eziphilayo zifundiswa nanamhlanje. Ukususela malunga nama-1900 ukuya ku-1955, ukuyila kunye neencwadi zika-Wright kwathonya ukuzakhela kwe-America, ukuzisa ubukumkani obuba ngama-American ngempela. I-Wright's School Prairie designs yavuselela uthando lwaseMelika kunye neRustin Style yasekhaya, into elula kunye neyincinci yesakhiwo esisezantsi, isakhiwo esingenanto kunye nesimboli esiphezulu. I-Usonian iyakhenxela ukuba yenze-it-yourselfer. Kwanamhlanje, ukubhala kukaWright malunga nokucwangciswa kwezinto eziphilayo kunye nokuyila kubonwa ngumyili wezendalo. Kaninzi "
Iimpembelelo zaseBungalow zaseNdiya
Ukubuyiselwa kweColonial Revival Bungalow, ngo-1932, eSan Jose, eCalifornia. Ifoto nguNancy Nehring / E + / Getty Izithombe
Ebizwa emva kweendawo zokuhlala eziqingqiweyo ezisetyenziswe eIndiya, izakhiwo ze-bungaloid zibonisa ukulungelelanisa-ukuchaswa kwexesha le-Victorian opulence. Nangona kunjalo, akusiyo yonke i-bungalows yaseMelika yayincinci, kwaye izindlu ze-bungalow zidla ngokugqithisa iindlela ezahlukeneyo, kuquka uChwepheshe kunye neSandla, ukubuyiswa kweSpeyin, ukuVuka kweColonial kunye ne-Art Moderne. Iimpawu zeBungalow zaseMelika, ezivelele kwikota yokuqala ye-20 leminyaka phakathi kwe-1905 no-1930, zifumaneka kuwo wonke ama-US. Ukususela kumgca we-stucco ukuya kutshitshiweyo, i-bungalow stylings ihlala enye yezona zinto zizithandwa kwaye zintanda zamakhaya eMelika. Kaninzi "
Ukuhlaziywa Kwamaxesha Okuqala Kwama-20
Ikhaya likaBantwana likaDonald Trump c. 1940 eQueens, eNew York. Ifoto nguDrew Angerer / Getty Images
Kwiminyaka yokuqala ye-1900, abakhi baseMelika baqala ukugatya izitayela ze-Victorian ezicacileyo. Iindlu zangekhulu elitsha zaziba zihambelana, zinoqoqosho, kwaye zazingacwangciswanga njengoko i-middle middle class yaseMelika yaqala ukukhula. Umninimzi waseNew York ongu-Fred C. Trump, wakha le ndlu yaseTudor yokuvuselela ngo-1940 kwisiqendu saseJamaica sase-Queens, kwisiqithi saseNew York City. Leli likhaya lomfana waseMerika uMongameli uDonald Trump. Abamelwane abanjengezi zinto babenzelwe ukuba baphakamise kwaye bazuze inxalenye yokhetho lwezakhiwo-izakhiwo zaseBrithani ezifana neTudor Cottage zacatshangelwa ukuba zikhangele ukubonakala kobuhlanga, ubuzwe, kunye nobukhosi, njengokuba i-neoclassicism yavusa ingqondo yentando yeninzi kwiminyaka yokuqala .
Zonke izithili zazingekho ngokufanayo, kodwa ngokuqhelekileyo ukutshintsha kwendlela efanayo yokwakha kwakuza kubakho isikhalazo esifunekayo. Ngenxa yeso sizathu, kuwo wonke ummandla wase-US unokufumana izakhiwo ezakhiwe phakathi ko-1905 no-1940 kunye nezihloko eziphambili-UbuGcisa neNzandla (yezandla), izakhiwo zeBungalow, iiNdlu zoMsebenzi zaseSpain, izitayela zaseMelika ezineendlela zokuhlala, kunye nemizi yokubuyiselwa kwamaKoloni yayivamile.
I-Mid-20th Century Boom
Ikhaya leMelika laseMidcentury. Ifoto nguJason Sanqui / Moment Mobile / Getty Izithombe
Ngexesha loKuCaluleka okukhulu, icandelo lokwakha ludla. Ukusuka kwi- Stock Market yahlaselwa ngo-1929 kwaze kwaqhunyiswa ibhomu ePearl Harbor ngo-1941 , abo baseMerika abanokufumana izindlu ezintsha babefudukela kwiindlela ezilula. Emva kweemfazwe zaphela ngo-1945, amasosha aseGI abuyela e-US ukwakha iintsapho kunye namadlelo.
Njengamajoni abuyele kwiMfazwe Yehlabathi II, abaphuhlisi beempahla baxhamla ukuhlangabezana nokufunwa kwezindlu ezingabizi. Amakhaya enkulungwane-ntsuku ukusuka ngo-1930 ukuya kowe-1970 yayiquka isakhiwo esingancinci seMveli, i-Ranch, kunye nesithandwa seKapa Cod style. Ezi ziyilo zaba yizona ziqhamo zedolophu ezikhulayo ekuphuhliseni ezifana ne-Levittown (kwi-New York nasePennsylvania).
Ukwakhiwa kwezakhiwo kwaqala ukuphendula kumthetho we-federal-uMthetho we-GI Bill ngo-1944 uncedise ukwakha amadolophu amaninzi aseMerika kunye nokudalwa kwendlela yeendlela eziphakathi komthetho we-Federal-Aid Act Act ka-1956 eyenzeka ukuba abantu bangahlali apho basebenza khona.
"Neo" Izindlu, ngo-1965 ukuya kuNje
Umxube we-Neo-Eclesctic weNdlu zeTytile. Ifoto nguJ.Castro / Moment Imfono / i-Getty Izithombe (ihlanjwe)
I-Neo ithetha itsha . Ngaphambili kwimbali yesizwe, abaBawo abaQalayo baqalisa ukwakheka kwe-Neoclassical kwi-demokrasi entsha. Ngaphantsi kweminyaka engamakhulu amabini kamva, i-middle middle class yaseMelika yayiqhambile njengabasebenzisi abatshintshi bezindlu kunye ne-hamburgers. UMcDonald's "super-size" amafries akhe, kwaye amaMerika ahamba amakhulu kunye nezindlu zabo ezintsha kwiindlela eziqhelekileyo-i-Neo-colonial, i-Neo-Victorian, i-Neo-Mediterranean, i-Neo-eclectic, kunye nemizi ephezulu eyayibizwa ngokuba nguMcMansions. Amakhaya amaninzi amatsha awakhiwe ngexesha lokukhula kunye nokuphumelela ukuboleka iinkcukacha kwiimpawu zembali kwaye zidibanise nezinto ezikhoyo. Xa amaMerika angakha nantoni na ayifunayo, bayayenza.
IKhaya leMinyaka eliMaphakathi leeNkulungwane elakhiwe yi-Alexander Building Inkampani ePalm Springs, eCalifornia. Ifoto nguCarol M. Highsmith / Buyenlarge / Getty Izithombe
Abafuduki bevela kulo lonke ihlabathi baye beza eMelika, beza kunye namasiko amadala kunye nezindlela ezixabisekileyo zokudibanisa neendlela zokuqala eziza ku-Colonies. Abahlali baseSpain eFlorida kunye ne-America yaseMzantsi Melika bazisa ilifa elityebi lezakhiwo zobugcisa kwaye badibanisa neengcamango ezibolekwa eHiii nasePueblo Indian. Imihla yamanje "imizi yaseSpanish" idla ngokuba yiMedithera kwi-flavour, iquka iinkcukacha ezivela e-Italy, ePortugal, e-Afrika, eGrisi nakwamanye amazwe. Izitayela eziphefumlelweyo zaseSpeyin ziquka iPueblo Revival, Mission, kunye neNeo-Mediterranean.
IsiSpeyin, saseAfrika, isiMerika saseMerika, isiCreole kunye nezinye iindawo zokuhlala zidibanisa ukudala ukudibanisa okungafaniyo kwezakhiwo zezindlu kwii-coloni zaseMerika zaseFransi, ikakhulukazi eNew Orleans, i-Mississippi Valley, kunye ne-Atlantic yonxweme yaseTidewater. Amajoni avela kwiMfazwe Yehlabathi I abenomdla omkhulu kwiimpawu zezindlu zaseFransi.
Izindlu zanamhlanje zityhutyhile kwiifom eziqhelekileyo, ngelixa izindlu zakwa-postmodernist zidibanisa iifom zendalo ngendlela engalindelekanga. Abaqulunqi baseYurophu abafudukela eMelika phakathi kweMfazwe Yehlabathi bazisa i-modernism eMelika eyahluke ku-Frank Lloyd Wright yase-American Prairie. UWalter Gropius, uMies van der Rohe, uRudolph Schindler, uRichard Neutra, uAlbert Frey, uMarcel Breuer, uEliel Saarinen-bonke aba baqulunqi bezakhiwo zathonya i- Palm Springs ukuya eNew York City. UGropius noBreuer bazisa iBauhaus, leyo iMies van der Rohe yaguqulwa yaba yindlela yamazwe ngamazwe. RM Schindler wathatha iiplani zamanqaku ezikhoyo, kuquka i-A-Frame house , ukuya kwinqanaba laseKalifornia. Abaphuhlisi abanjengoJoseph Eichler noGeorge Alexander baqeshe aba basebenzi beetalente ukuphuhlisa i-Kalifornia engezantsi, ukudala izitayela ezibizwa ngokuba yiMid Century Modern, Art Moderne kunye neDesert Modernism.
Indlu endala kunazo zonke e-US Mhlawumbi Yiba nguLowo eSanta Fe, eNew Mexico, c. 1650. Ifoto nguRobert Alexander / Iifoto ze-Archives Collection / Getty Izithombe
Kwakudala ngaphambi kokuba abakoloni beze eNyakatho Melika, abantu basekuhlaleni abahlala kuloo mhlaba babakha izindlu ezifanelekileyo ezifanelekileyo kwimozulu kunye nomhlaba. Iikholoni zaboleka izakhiwo zamandulo zendawo kwaye zidibanisa nezithethe zaseYurophu. Abakhi bomhla banamhlanje bajonge abantu baseMelika ngamabono malunga nendlela yokwakha izakhiwo zezoqoqosho, ezobuchule ezinobungakanani bezindlu ezivela kwizinto ze-adobe.
Dowse Sod House, 1900, e Comstock, County Custer, Nebraska. Ifoto nguCarol M. Highsmith / Buyenlarge / Getty Izithombe (ehlanjwe)
Izenzo zokuqala zokwakha zingaba ziindawo ezinzulu zobumba ezifana ne-prehistoric Silbury Hill eNgilandi. E-US enkulu kunazo zonke i -Cohokia Monk's Mound kule nto ngoku eyi-Illinois. Ukwakhiwa nomhlaba ubugcisa basendulo, kusetshenzisiwe namhlanje kwisakhiwo se- adobe, i- rammed earth, kunye nezindlu ze-block block.
Imizi yanamhlanje yanamathuba amaninzi kwaye ihle kakhulu, kodwa kwiColonial America, iikhabhi zemizi zibonise ubunzima bobubomi kwimida yeNorth America. Kuthiwa lo mbandela ongeyena kunye nobunzima bokutyala kuthiwa uye waziswa eMelika esuka eSweden.
Umthetho we-Homestead ka-1862 wanika ithuba lokuba nguvulindlela ozenzayo ukuze abuyele emhlabeni kunye nezindlu ze-sod, izindlu ze- cob, kunye nemizi ye-bale . Namhlanje, abakhi kunye neenjineli bathatha inqaku elitsha kwizinto zokuqala zesakhiwo somntu-izinto ezisebenzayo, ezifikelelekayo, eziphathekayo eziphathekayo zomhlaba.
Izindlu ezikhethiweyo kwiPhepha leKhaya lasekhaya laseSlavavale, eCalifornia. Ifoto nguNancy Nehring / Moment Imfono / i-Getty Izithombe (ihlanjwe)
Ukwandiswa kwemizila yomzila kunye nokuveliswa komgca wendibano kwatshintsha indlela izakhiwo zaseMerika ezihlanganiswa ngayo. Iindlu ezenziwe ngeendlela eziqhelekileyo kunye nezindlu ezikhethiweyo ziye zaziwa kusukela ekuqaleni kwee-1900 xa iSears, Aladdin, iWardgomery Ward kunye nezinye iinkampani ezithunyelwa ngeposi zithumela iikiti zendlu ukuya kwiindawo ezikude zaseUnited States. Ezinye zezakhiwo zokuqala ezikhethiweyo zenziwe ngensimbi yentsimbi ephakathi kwe-19 leminyaka. Amacandelo aya kubunjwa kwi-foundry, athunyelwa kwisiza sokwakha, aze ahlanganiswe. Olu hlobo lomgangatho wendibano yokukhiqiza ngenxa yokuba udume kwaye unyanzelekile njengongxowankulu waseMerika. Namhlanje, "iintlobo" zifumana inhlonipho entsha njengabacwangcisi bazama ngeefom ezintsha ezintsha kwiikiti zendlu. Kaninzi "
Ikhaya leShedyuli lenzelwe ukwenza i-Atom yeCombon Atom. Ifoto nguRichard Cummins / i-Lonely Planet Izithombe / Getty Izithombe
Ama-1950 ayekho malunga nomdlalo wendawo. Ubudala beZithuba zoPhando luqaliswe noMthetho weSizwe we-Aeronautics kunye noMhlaba we-1958, owadala i-NASA-kunye nemigodi nemigodi. Ixesha lenze i-innovative ye-innovative, kwi-metal prefab yaseLustron izindlu kwiidome ze-geodesic ezinobungane.
Iimbono zokwakha izakhiwo zedome zibuyele kumaxesha okuqala, kodwa inkulungwane ye-20 yazisa iindlela ezintsha ezakhayo kwi-designer-dome. Kuvela ukuba imodeli yesiganeko sangaphambili isicwangciso esilungileyo sokumelana nemimoya yezulu eneemeko ezinobundlobongela kunye neengqungquthela-umphumo wenkulungwane we-21 wokutshintsha kwemozulu.
Ikhaya leMinyaka eli-21 leminyaka. Ifoto nguBryan Bedder / Getty Izithombe
I-Architecture iyakhupha izikhumbuzo zelizwe lakubo okanye iphendule imicimbi yeziganeko. I-Architecture ingaba isibuko esibonakalisa okokuxabisa-njenge-Neoclassicism kunye nentando yeninzi okanye ukunyusa okwenziweyo kwexesha elimisiweyo. Ngenkulungwane ye-21, abanye abantu baye bajika umkhondo wabo wokuba baphila ngokuzikhethela ukungena ngaphandle, ukunciphisa, nokuqhekeza amawaka eenyawo eziqhelekileyo endaweni yabo yokuhlala. I-Movement Tiny House Movement isabela kwiingxwabangxwaba zentlalo ye-21 yenkulungwane. Amakhaya amancinci angama-square angama-500 ezinyawo ezinamalungiselelo amancinci-kubonakala ngathi uyalahlwa yinkcubeko enkulu yaseMelika. "Abantu bajoyina le ntshukumo ngezizathu ezininzi," kuchaza iWebhsayithi yeTiny Life, "kodwa izizathu ezidumileyo zibandakanya ukukhathazeka kwendalo, ukukhathazeka ngokwezimali kunye nomnqweno wokufumana ixesha kunye nenkululeko."
Indlu encinci njengempendulo kwiimpembelelo zentlalo ingaba yinto ehlukileyo kunezinye izakhiwo ezakhiweyo ekuphenduleni imicimbi yeziganeko. Yonke indlela kunye nokunyakaza kuyaqhubela phambili ingxoxo yombuzo-nini isakhiwo sibe yakhiwo?
> Yintoni iMovement Tiny House? kwi-Tiny Life, http://thetinylife.com/what-is-tiny-house-movement/ [kufumaneka ngoSeptemba 26, 2017]
Ukwakha Indlu Yenqatha? Ngokukrakra?
URichard Meier, uMcwangcisi woKhanya kunye neNdawo
Isiganeko sexesha (CT): Yintoni okuyiyo, Kutheni kubalulekile
Ukuqonda i-Factorial (!) KwiMathematika ne-Statistics
I-American Revolution: I-Battle of Brandywine
I-Creighton Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iingoma ezi-9 eziphezulu zezulu ze-1980s
Izizathu ezi-8 zokuba ungabambani iintlanzi
Ukubetha Abaxhasi be-Blackjack
Uvavanyo lweMveliso iThuluzi leTire leDynaplug
Isingeniso kwizinto zeMculo